Xus loo sameeyey sakartii lagu dilay weerarkii baarlamanka Soomaaliya – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Muqdisho – Mareeg.com: Madaxda dowladda Soomaaliya ayaa maanta baarlamaanka kala qeybgalay xus loo sameeyey askartii ku geeriyooday difaacidda baarlamaanka Soomaaliya markii toidobaadkii hore Alshabaab weerareen.
Madaxweynaha Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud, Raysulwasaare C/weli Sheekh iyo gudoomiyaha baarlamaanka Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari iyo qaar ka mid ah golaha wasiirada ayaa tegay baarlamaanka si ay uga qeyb qaataan u duceynta askartii u dhintay difaaca xildhibaanada Soomaaliya.
Guddoomiyaha Golaha Shacabka Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari oo kulanka khadbadiisa furitaanka hadal ka jeediyay ayaa faah faahin ka bixiyay tirada askartii naftooda ku waayay difaacida xarunta Golaha Shacabka ee ka midka ahaa ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya, waxaana uu madasha ka aqriyay magacyadooda.
“Inta geeriyooyatay waxaa ugu horeeya Dhamme Daahir Gurxan Maxamuud, Cabdalla Xasan Cabdi oo ciidanka xoogga dalka ka tirsanaa, Alifle Maxamed Cabdullaahi Cabdi oo ka tirsan Ciidanka booliska, Dable Saciid Maxamuud Sheekh Aadan oo booliska ka mid ah, Dable Maxamed Axmed Cageey oo booliska ah, Dable Yuusuf Maxamuud Xuseen oo ka tirsan booliska, Dable Jamaal Maxamed Cabdi oo ka tirsan ciidanka booliska, Dable Xasan Makeer Maxamed oo booliska kamid ah, Maxamed Aadan Madkeer oo isna booliska ka mid ahaa, Xidigle Maxamed Calasow Maxamuud oo Nabad sugida ka tirsan waa inta ku geeriyootay difaacidda xarunta Golaha Shacabka” ayuu yiri Prof. Jawaari.
Guddoomiye Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu tilmaamay in Golaha Shacabka guddoonkooda ay ka go’antahay inay sii labo laabaan, iyaga iyo Xildhibaannada howlaha ay u hayaan shacabka Soomaaliyeed, islamarkaana falalka nuucaasi oo kale ahna, ee dhacay aysan saameyn iyo niyad ku yeelan doonin.
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya, Cabdiweli Sheekh Axmed Maxamed ayaa xusay in Xukuumadda ay qaaday talaabooyin deg deg ah, markii ay dhacdaasi dhacday, sida daryeel u fidinta dhaawacyada Xildhibaannada iyo askartii ku dhaawacanay, iscasilaadda Wasiirkii Amniga, waxaana uu Ra’iisul wasaaruhu ka codsaday mudanayaasha Baarlamaanka inay meel mariyaan hindise sharciyeedka la dagaallanka argagixisada.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo soo xiray kulanka ayaa tacsi kaddib waxa uu xusay in ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ay fashiliyeen weeararka Alshabaab soo maleegeen, waxaana uu taasi ku tilmaamay inay muujineyso sida ay ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya uu awood buuxdo iyo karti u leeyihiin ka hortagga falalka argagixisonimo.
Madaxweynaha ayaa si la mid ah aragtida Ra’iisul wasaaraha waxa uu Baarlamaanka dareensiiyay baahida loo qabo ansixinta sharciga la dagaalanka argagixisada, maadaama hadda si isku mid ah loo xukumo midka mindida wax ku dila iyo kan argagixisada ah ee umadda isku qarxinaya sida uu yiri.
Madaxweyne Xasan ayaa baarlamaanka hortooda ku balan qaaday xanaaneynta iyo daryeelidda agoontii ay ka geeriyoodeen askartii naftooda u huray difaacidda xarunta Golaha Shacabka, isagoo dalacsiiyay ciidamadii weerarkaasi ka hortagay.
“Kan Madaxweynaha Jamhuuriyadda iyo kan Taliyaha guud ciidanka qalabka sida ahaan waxaan rabaa in aan hortiina ka sheego, ciidankii halkaa ku geeriyooday, kuwii geeriyoodayna min labo darajo ayaa la dalacsiinayaa, kuwii dhaawacmayna min hal darajo ayaa la dalacsiinayaa, qarnigii hore ee 20-aad waxaan qabnay nin la yiraahdo Maxamed Cabdulle Xalane oo magaca Soomaaliya iyo meesha uu ka galay aad ogtihiin, qarniga kow iyo labaatanaad Daahir Gurxan ayaa noo ah astaanta geesiyaasha Soomaaliya, Gurxan ayaa noo ah qarnigan 21aad” ayuu yiri Madaxweyne Xasan Sheekh.
Sheekh Cali Sheekh Maxamuud “Sheekh Cali Dheere” oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed oo isna kulanka ka hadlay ayaa xusay in askartii naftooda u huray difaacidda xarunta Golaha Shacabka ay yihiin shahiid, isagoo intaa ku daray in ay dalka ku yeeliyihiin xasuusin iyo u duceyn.
Haweeney si weyn loo raadinayo oo khiyaantay booliska Kenya